अकुत कुम्ल्याउने भ्रस्ट सूचीमा थप २६ परे एक सेयर गरेर नंग्याउने कि ? ~ Khabardari.com
अकुत कुम्ल्याउने भ्रस्ट सूचीमा थप २६ परे एक सेयर गरेर नंग्याउने कि ?
पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रुपमा सम्पती आर्जन गरेको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका सहसचिव एवं विभागीय प्रमुख सहित २६ पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ
। सार्वजनिक ओहोदामा रहेर छानविन सुरु गरिएकोमा निजामति कर्मचारी, चिकित्सक, विभागीय प्रमुख, परिषद सदस्य, डीन, आयोगका प्रमुख लगायत रहेको अन्नपूर्ण पोष्टले समाचार छापेको छ । सम्पती लुकाएको आशंका गरिएका सम्भावित बैंकमा लकर बन्द गर्न अख्तियारले पत्र पठाएको राष्ट्र बैंक निकट स्रोतले जनायो ।
को को परे छानविनमा